BASENJI DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Basenji Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Perrin the Basenji oo 1 sano jir ah oo socdaal ku jooga xero - Wuu necbaa biyaha, laakiin wuu geli lahaa si uu cagihiisa u qoyo.
Liiska Eeyaha Isku-dhafan ee 'Basenji Mix'
Eyga Bush ee Afrika
Eyga Afrikaanka ah ee Barkless
Basenjis waa ey siman, muruqyo leh, eeyaha isboortiga ee dhinaca yar. Madaxa ayaa ku duudduubmay foodda hore oo masarku wuu ka gaaban yahay dhakada, Taasoo fidsan. Indhaha yar yar, ee yicibta u eg ayaa u eg mugdi ilaa bunni madow. Dhegaha waa toosan yihiin, yar yihiin, kacsan yihiin oo ay ka furan yihiin xagga hore. Eyga dhabarkiisu waa siman yahay lugahana waa toosan yihiin. Dabada ayaa sare loo dhigay oo waxaa loo duudduubay labada dhinacba. Koodhku waa gaaban yahay, dhalaalaya oo ganaaxan wuxuuna ku yimaadaa madow saafi ah, naxaas, casaan, casaan, ama midab leh isku darka madow, tan iyo cadaan, ama madow, gogol iyo caddaan. Heerka AKC wuxuu ku baaqayaa eey inuu cadaan ku yeesho cagaha, laabta iyo caarada dabada. Lugaha cad, ololka iyo qoorta ayaa ikhtiyaari ah. Basenji ma ciyo, laakiin wuxuu sameeyaa buuq yodel ah. Sidoo kale waa cabaad, cabaad iyo ciyo, iyadoo ku xiran niyadda eyga.
Basenji waa mid feejigan, kalgacal leh, firfircoon oo xiisaha leh. Waxay jeceshahay in la ciyaaro oo ay sameysato xayawaan wanaagsan, illaa inta si joogto ah loo maareeyo laga bilaabo da'da hore. Waa mid caqli badan oo si fiican ayuu uga jawaabaa tababarka oo leh rabitaan xoog leh oo aan ku farxo. Waa lagu xereyn karaa shisheeyaha, sidaas darteed si wanaagsan ula dhaqan bulshada . Basenji xoogaa waa la ilaaliyay, laakiin wali waxay abuuri kartaa xiriir adag oo lala yeesho aadanaha. Waa inaan lagu aaminin xayawaanka aan xayawaanka ahayn . Waxay ku fiican tahay carruurta fahamsan sida loo fahmo hogaan muuji xagga eyga. Basenji ma jecla cimilada qoyan. Way jeceshahay calalin , sidaas darteed inaad siiso alaabo badan oo ay ku ciyaaraan iskood ayaa fikrad fiican ah. Nooca ayaa jecel inuu fuulo oo si fudud uga gudbi karo deyrka siligga. Waxay leedahay astaamo u gaar ah oo aan ciyi karin (waxay ka dhigeysaa boog yar oo dareeraha ah halkii) iyo nadiifinta lafteeda sida a bisad . Waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay mid deg deg ah, frisky ah oo aan daal lahayn ciyaarta. Inta badan dhibaatooyinka Basenji badanaa waxay ku lug leeyihiin ismaandhaaf u dhexeeya milkiilaha iyo xayawaanka. Milkiilayaashu waxay ku khaldamayaan sifada 'aamusnaanta' inay micnaheedu tahay waxqabad la'aan halkii ay sanqadh lahayn sidaas awgeed, waxaa ku dhibaateeya firfircoon, inkasta oo ay aamusnaan yihiin, eey. Basenjis waxay ubaahantahay jimicsi maalinle ah sii daayo tamarta maskaxda iyo jirka . Basenjis aad ayey xariif ugu yihiin helitaankooda dariiqadooda waxay ku guuleystaan ​​wax yar oo ad-adeyg badan marka loo eego soo jiidashada, sidaas darteedna waxay u baahan yihiin milkiile soo bandhiga maamulka dabiiciga ah . mid xeerar dejiya oo ku dheganaada. Deggan, laakiin xasilloon, kalsooni leh oo iswaafaqsan, Basenjis leh milkiilayaal jilicsan ama dadban, ama milkiileyaal aan lahayn waafaqsan shuruucda waxay noqon doontaa mid dalbanaya. Eyga ayaa qaadan doona doorka hogaamiyaha baakadka iyo dhibaatooyinka dhaqanka ayaa soo bixi doona, gaar ahaan markii keligaa laga tago . Milkiil fahmay dabeecadaha canine oo uu ula dhaqmaa eeyga sida ku habboon iyaga oo ka heli doona inay noqdaan xayawaanno cajiib ah.
Dhererka: Ragga 16 - 17 inji (41 - 43 cm) Dumarka 15 - 16 inji (38 - 41 cm)
Miisaanka: Ragga 22 - 26 rodol (10 - 12 kg) Dumarka 20 - 25 rodol (9 - 11 kg)
Noocani wuxuu u nugul yahay cudurka Fanconi's syndrome (dhibaatooyinka kalyaha), oo ay tahay in la daweeyo isla marka calaamadaha la ogaado. Sidoo kale, waxay u nugul tahay soo-noqoshada maqaarka ee isha, dhibaatooyinka xiidmaha iyo indhaha.
Basenji waxay ku fiicnaan doontaa guri dabaq ah haddii ay hesho jimicsi ku filan. Waa mid aad u firfircoon gudaha iyo daarad yar ayaa sameyn doonta. Basenji-ka ayaa ugu farxadda badan marka lagu sii hayo laba ama saddex Basenjis kale dhexdooda ah kuma dagaallami doonaan.
dixiriga dixiriga ah ee eeyaha sawirro
Basenji wuxuu ubaahan yahay jimicsi maalinle ah oo xoog leh. Waxay u janjeeraan inay cayilaan oo caajis noqdaan haddii mulkiilaha uusan arrintaas si joogto ah uga hadlin. Noocani wuxuu u baahan yahay a socod dheer maalin kasta .
4 - 6 eeyo yaryar oo Basenjis ah ayaa kuleylka gala sanadkii hal mar, halka inta badan noocyada kale ay yihiin laba jeer sanadkii.
Basenji wuxuu isu maydhaa sidii bisad oo kale mana laha wax ur ah oo loo yaqaan 'doggie ur', sidaa darteed is-qurxin aad u yar ayaa loo baahan yahay. Noocani wuxuu daadiyaa timo yar.
Raadkii ugu horreeyay eey ee la mid ah Basenji waxaa laga helaa qabuuraha Masaarida iyo sawirada derbiga shan kun oo sano ka hor. Sidoo kale loo yaqaan Congo Dog, waxaa markii ugu horreysay la geeyay Ingiriiska 1937. Kuwa ingiriiska ka shaqeeya oo ingiriis ah ayaa sifeeyey oo adduunka oo dhan ka dhoofiyay. Afrika dhexdeeda eygu waxay u isticmaali jireen hage hagaha kaynta, inuu uga digo kahortaga xayawaanka halista ah, si uu u tilmaamo ugana soo qaado ugaarsiga yar uguna kaxeeyo shabagyada. Midka koowaad qashin eey yaryar oo Basenji ah ku dhashay kuna barbaaray qaangaadhnimada USA waxay ahayd 1941, waxaana markii ugu horreysay AKC aqoonsaday 1944.
CCR = Diiwaanka Canine ee Canadianka
Basenjis — Gunther (tricolored) jira 2 ½ sano jir iyo Bocor (casaan) 8 bilood jir ah— 'Waxaan joogay guriga abtiyaashay maalmo kooban basenjiskiisuna waa BOMB !! Midka cas ee yar waxaa lagu magacaabaa Bocor kan kalena waa Gunther. Aad bay u macaan yihiin. Bocorka ayaa igu seexday sariirta iyadoo madaxeeda hoos fadhida garka. Iyadu waa uun sooo quruxsan oo macaan. Iyagu waa kuwo si aan caadi ahayn u dhaqaaqa aadna loola yaabay cabbirkooda yar. Oo aad ugu fiicnaaday boodboodka waxyaalaha dhaadheer sida dhabarka sariirta (oo madaxaygu nasiib darro ku ahaa dhinaca kale inta badan). ) Aad bay u cabsi badan yihiin. Waxaan jeclaan lahaa inaad la kulanto iyaga mararka qaarkood. Arday yar oo cabsi badan! '
Keiki eey Basenji ah oo jira 5 bilood
Perrin the Basenji oo jira 1 ½ sano jir kuna jira safar xero
Qaahira saddaxlaha Basenji ee 18 bilood jira
brussels griffon faransiiska isku darka bulldog
Benji Basenji oo wada socda Shrek
Perrin the Basenji oo ah 1 sano jir
Waxaan rajeyneynaa in yar yar ee 'Basenji' ee 6 toddobaad jir ah ay weheliso qashinkeeda
'Kani waa EV, 8 toddobaad oo yar oo Basenji ah oo ah cunug aad u xun, laakiin sameeya waxa Basenjis ugu fiican tahay, baxsashada. Tani waa mid ka mid ah sababaha Basenjis aysan u ahayn nooc qof kasta. Ka sokow awooddooda inay si fiican u fuulaan xayndaabka, waxay sidoo kale kori karaan geedaha, qodan karaan xayndaabka oo ay ka boodi karaan dayrarka Waxay sidoo kale noqon karaan kuwo aad u burburin kara guriga. '
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Basenji
Basenji Sawirada 1
Basenji Sawirada 2
eyga buur bernese eey puri retriever eey
maxay eeyaha sanka u noqdaan bunni
Faransiiska ingiriiska bulldog mix puppy
nus pug nus adhijire Jarmal ah
eey ku bilaabma x